အားလုံး မင်္ဂလာပါ — MYSTERY ZILLION
May 2011 edited May 2011 in မိတ်ဆက်
Hardware နဲ့ Networking ကို စိတ်၀င်စားလို့လေ့လာနေပါတယ်။ အစ်ကိုအစ်မအားလုံး ကူညီသင်ပြပေးကြပါနော်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :-h
စကားမစပ်။ ။ Unicode က အတော်ခက်တယ်နော်။ အကြာကြီးရိုက်လိုက်ရတယ်။ အဟီး :-D
မင်္ဂလာပါ။ unicode ကို ဘာ keyboard နဲ့ ရိုက်လို့ အကြာကြီး ရိုက်လိုက်ရတာလဲ မသိဘူး ?
ကြိုဆိုပါတယ် ..................... =D>
Alpha Win2Unicode ထင်ထယ်။ ဆိုင် က တင်ထားတာပဲခင်ဗျ။ ဘယ် unicode က ပိုအကောင်းလဲမသိဘူးခင်ဗျ။
@ParlayyarLay , Alpha Win2Unicode is not unicode keyboard. You should try KeyMagic with zawgyi unicode keyboard.
May I also want to intorduce myself. I want to be friend with all of MZ members. I can't type unicode. Please be patient . I will try it.
Bro @ParlayyarLay , you can use NHM Writer for Unicode. Download at <a href="http://www.myanmars.net/winmyanmar/win-innwa-5/78-download-winuni-innwa-font.html">Here</a>. And @nwaytamar , too.
p.s. Warmly Welcome from MZ, bro. ^^
ယူနီကုတ်ဆိုတာ မြန်မာ၂/ မြန်မာ ၃ ဖောင့်နဲ့ ကီးမန်းနဲ့တွဲသုံးတာကို ခေါ်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
တစ်ခြားနည်းတွေတော့ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သိပ်တော့မသိပါဘူး
ကျွန်တော်က အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတော့ ယူနီကုတ်ဆိုရင် မြန်မာ ၂ ဖောင့်နဲ့သုံးတာကို ရေရေလည်လည် သုံးနေရလို့ပါ။ အသစ်လေးကို နောက်ကျမှ ကြိုတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါ။ အင်တာနက် မသုံးတာ ကြာနေ လို့ပါ။ မှားတာရှိရင်လည်း အမှန်ပြောပေးပါဦးနော်။ သတ်ပုံအတိုင်းရိုက်ရတော့ လွယ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ alt ကီးတွေ မမှတ်ရတော့ဘူးပေါ့။ Shiftfကလေးမှတ်ထားရုံပဲ။ စာလုံးထပ်တာတွေအတွက်ပြောတာပါ။